Sheekada filimka Thugs Of Hindostan: Aamir Khan waa bini aadan markaan sheekadii ugu liidatay noloshiisa ayuu doortay!!! – Filimside.net
Sheekada filimka Thugs Of Hindostan: Aamir Khan waa bini aadan markaan sheekadii ugu liidatay noloshiisa ayuu doortay!!!
November 8, 2018 Zakarie Abdi
Hordhaca: Filim in feestada Diwali la saaro waxay ka dhigan tahay inuu yahay filim oo dadka feestadooda ka qayb qaadan ama madadaalin karo sidaa darteed filimka Hindiya ugu weyn THUGS OF HINDOSTAN waxaa laga rabaa madadaalada ugu weyn sanadkan in laga helo.
Jilaayaasha filimkan: Amitabh Bachchan, Aamir Khan, Katrina Kaif, Fatima Sana Shaikh, Ronit Roy, Lloyd Owen
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 45-daqiiqo
Fariinta Filimka TOH oo kooban: Filimkan sheeko ahan wuxuu ka hadlayaa dad Hindi ah oo is xil qaamay lana dagaaleen gumeysigii Ingiriiska ahaa. Sanadka marka uu ahaa 1795 Hindiya oo dhan badankeeda waxaa gacanta ku dhigay Ingiriiska marka laga reebo hal magaalo oo uu boqor [Ronit Roy] ka talinaayay.
Laakiin sheydaanka weyn ee aan nixin Clive [Lloyd Owen] sidoo kalena hogaamiyo ciidamada Ingiriiska ayaa magaalada kusoo duulayaan waxay dilayaan boqorkii ka talinaayay [Ronit Roy] iyo boqoradiisa.
Ilaaliyaha boqortooyadii Ingriiska bur buriyeen Khudabaksh [Amitabh Bachchan] ayaa duulankan ka bad baadiyo sidoo kalena wuxuu la baxsanaa gabadha ay dhaleen boqorka iyo boqorada la dilay Zafira [Fatima Sana Shaikh].
11-sano kadib Khudabaksh [Amitabh Bachchan] iyo Zafira [Fatima Sana Shaikh] waxay la imaanayaan awood xoogan ayagoo noqonayaan burcad bariga iyo banaanka ku dhacaan hantida gumeysiga Ingiriiska una socdaan inay Hindiya ka xoreeyaan caddowga dhibka ku haayo.
Haddaba abaan duuliyaha ciidamada Ingiriiska gumeysiga ku heestaan Clive [Lloyd Owen] wuxuu la heshiinaa ninka wajiyada badan Firangi Malla [Aamir Khan] si uu u daba galo halka ay ku dhuumaaleesanayaan Khudabaksh [Amitabh Bachchan] iyo Zafira [Fatima Sana Shaikh].
Firangi Malla [Aamir Khan] waa nin labo wajiile ah sidoo kalena aan la fahmi ujeedkiisa marwalbana qayaanadiisa badan tahay wuxuuna caawinaad ka helaa saaxiibkiis Shanichar [Mohd Zeeshan Ayyub] taasi oo u suura galineyso inuu ciidamada Khudabaksh [Amitabh Bachchan] ka mid noqdo.
Kadib filimkan waxaa loo daawan doonaa qeybihiisa dambe Khudabaksh [Amitabh Bachchan] inuu fahmo qayaanada uu wato Firangi Malla [Aamir Khan], dagaalka dhex maraayo labadooda, iyo Firangi Malla [Aamir Khan] wajigiisa dhabta ah in la ogaado ma muwaadin Hindiya xurnimo la jecelaa mise waxaa ka run ah sida uu daba dhilif ugu yahay gumeysiga Ingiriiska?
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka TOH: Waxaa nasiib daro ah in qaabka sheekada loo dhigay inaysan wax xiiso ah laheyn sidoo kalena la fahmi karo wax walbo ee xiga oo dhacaayo waana waxa ugu weyn ee nuxurka ka qaaday filimkan waxaa fiicneyd in qayaano iyo is kululeysi wacan laheyn.
Fursad qaali ah ayaa Bollywood-ka ka luntay lacagta la galiyay TOH waxay ahayd tayo u qalanto inuu lahaado laakiin midaas ma dhicin sheeko aad u liidato qaabka loo qoray ayaa ka dhigtay mashruucaan ceebtiisa inaysan cidna dabooli karin.
Vijay Krishna Acharya waa Director marwalbo dhaliil loo haayay waayo filimkiisii Tasshan sheeko ahaan aad uu u bur buray kadib Dhoom 3 ayuu sameeyay sidoo kale sheeko ahaan waa la dhaliilay laakiin ganacsi waali ah ayuu sameeyay iyo taxanaha Dhoom awgiis inay daawadayaasha kusoo dhaweeyeen.
Haatan Vijay Krishna Acharya ceebtiisa banaanka ayay usoo baxday filimka ugu weyn Hindiya labada Superstar Hindiya ugu weyn iyo shirkada Hindiya ugu weyn ayaa masuul looga dhigay inuu wax tayeeysan soo diyaariyo dadka qancin karo wuuna ku fashilmay midaas.
Bandhiga Jilaayaasha Filimka TOH: Amitabh Bachchan wuxuu la yimid bandhig awood buuxdo ka muuqato waana qofka ugu saameynta badan filimkan oo madaxiisa loo daawan karo inkastoo sheeko ahaan aad u liito mashruucan.
Aamir Khan doorkiisa labo wajiilaha ah iyo inu shactireeyo waa waxa ugu liito filimkan waan ka xunahay Mr. Perfectionist markaan wax saxan wuu dooran waayay waana bin aadan qaladkiisa uma qaban karno balse waxaan rajeyneynaa si dhaqsi ah inuu kaga soo qabto wasaqda uu TOH ka qaaday.
Fatima Sana Shaikh waa dadaashay balse saameyntii loo baahnaa ma aysan la imaanin madaama door weyn la siiyay, balse Katrina Kaif ayaaba ka daran waayo in filimka ay ku jirto xitaa shaki ayaa galaayo madaama ay labo hees iyo muuqaalo yar ku leedahay!
Muxuu Ku Liitaa Filimka TOH:
Director Vijay Krisshna Accharya fariintiisa oo ah midda ugu liidato sanadkan!
Aaladaha VFX iyo Graphics la adeegsaday ma ahan kuwo ka turjumayaan in filimkan 260 Crore miisaaniyad ah xambaarsan yahay.
Sheekadiisa filimkan oo ah wax la fahmaayo sida ay u socoto.
Muusiga filimkan oo aad u liidato.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimka TOH:
Bandhiga Amitabh Bachchan iyo geesinimada ka muuqato asigoo 75-sano sare u dhaafay dadaal ahaan.
Muuqaalada iyo goobaha lagu duubay oo kusoo jiidanayaan filimkan kaliya dhal dhalaalka araga ayaa la tayeeyay!
Action-kiisa oo wacan kuna soo jiidanayo mararka qaar waa qayb ka mid ah xiisaha filimkan in Action-kiisa wacan yahay.
Qiimeynta Sheekada Filimka TOH: 2/5 (Labo xidig)
Gunaanad: Waa qasab in filimka TOH afartiisa maalmood ugu horeyso ganacsi aad u weyn sameeyo madaama feestada Diwali lagu guda jiro balse marka ay feestada dhamaato waxaa hubaal ah mashruucaan in dadka aysan dib ugu laaban doonin daawashadiisa.
Waa markii ugu horeesay mudo dheer kadib filim Aamir Khan hogaamiye ka yahay kaasi oo diidmo xoogan sheeko ahaan kala kulmo dadka aflaanta falanqeeyaan iyo kuwo dhex dhexaadka ah ee arimaha ganacsiga ka faaloodaan.
Sidaa darteed waxaa la eegi doonaa TOH halka uu gaari karo asigoo sheekadiisa diidmadan xoogan la kulmeyso iyo sida Aamir filimkan u bad baadin karo.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka TOH waana mashruuc culees xoogan u bilaabanaayo:
Waxaa Aqrisay 2,119
Laa xawla sorry aamir way kula go’day markan!!!!!!
ani ahaan shekada filimka wax kama sheegi karo oo ma daawan lkn aamir khan waxaan ku taagersanahay inu dorkan nuucan ah sameyo maxa yeelay jilayaasha kalle ee xiligan hogaanka bollwoodka haayo badankood wey ka baqan iney filin door xumaan ah sameyaan amaba liita sida hadda u sameyay AK
abdi Xafit says:
intadan falin kafirso sxb filmkan wuu gulesanaya adne wax laqoray ayt aqrisay marka hafududanin an aragno natijada filmka
Sxb sare anaga ma fududaan sheekada waxa laga qoray ayaan soo turjunay meel walbo booqo hal shabakad oo amaantay sheekada filimka TOH hadaad soo heshid anaga ayaa beenaalayaan ah.
Mudo sedex sano ah ayaan bulshada usoo daabaceynaa arimaha aflaanta mana aysan dhicin hal maalin wax been ah inaan soo daabacno xaqiiqada jirto ma dhinac marno weyna noo siman yihiin atoorayaasha.
Mida kale filimka fariintiisa marka ay xun tahay fagta hore lagama dareemo sedexda maalmood ee ugu horeyso ganacsigiisa ee waxay dhibaateysaa wixii sedexda maalmood ama afarta maalmood ugu horeyso soo xasuuso Race 3 sedex maalmood 100 Crore ayuu ka talaabsaday balse cimri ahaantiisa 166 Crore wuu dhaafi waayay.
Sidaa darteed TOH sedex ama afarta maalmood ugu horeyso ganacsi weyn wuu sameyn doonaa laakiin waa hubaal hoos u dhac xad dhaaf ah inuu sameyn doono madaama lagu tilmaamay Aamir Khan filimkiisa ugu sheekada liito ee uu ebid sameeyo!
Waana soo daabici doonaa dadka filimada ka faaloodaan iyo dadka tiyaatarada u daawasho tageen aragti ahaan waxay fariinta TOH ku tilmaameen markaasna waxaan rajeynaa inaad qanci doontid marwalbana xasuusnaa runta kama gambano haddii dhamaan aqristayaasheena oo dhan ay dhibeyso waxaa muhiim ah xaqiiqada jirto inaan soo daabacno.